Madaxweyne Xasan oo ka tacsiyeeyey dilkii sarkaalka Turkiga – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweyne Xasan oo ka tacsiyeeyey dilkii sarkaalka Turkiga
28th May 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamud ayaa tacsi u diray qoyska, dowladda iyo shacabka Turkiga iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed geerida ku timid Allaha u naxariistee Marxuum Saadettin Dongan oo shalay koox bistooladley ah ay ku dileen Muqdisho.
“Innaa Lillaahi Wa inaa Ilayhu Raajicuun, geeridu waa xaq, waxaana tacsi u dirayaa qoyskii, Shirkadda Diyaaradaha ee Turkiga, Dowladda iyo shacabka Turkiga iyo shacabka Soomaaliyeed geeridii ku timid Marxuum Saadetin Dongan oo ka mid ahaa shaqaalaha Diyaaradda Turkiga (Turkish Airlines) una jooga Soomaaliya si uu ugu adeego shacabka Soomaaliyeed. Samir iyo Iimaan Eebbe ha naga wada siiyo, isagana Janaddii fardowsa Allaha ka waraabiyo. Aamiin.” Ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh.
Sidoo kale, Madaxweynaha Soomaaliya ayaa hey’adaha ammaanka amar ku siiyey inay baaritaan ku sameeyaan dilka. “Kooxaha nabad-diidka marnaba kuma guuleysanayaan argagaxa iyo dilalka qorsheysan oo ay la beegsanayaan shaqsiyaadka u adeegaya danaha shacabka iyo tan dalka” ayuu Madaweynuhu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey.
Shalay galab ayaa dabley hubeysan waxey agagaarka KM4 ku dileen madaxii amaanka shirkadda diyaaradda Turkish Airlines oo la oran jiray Saadettin Doğan.
Alshabaab: Qaraxyadii Jabuuti waxaan la beegsanay NATO
UN, EU & IGAD: Soomaaliya ma xamili karto in ay dib ugu noqoto is-mariwaa